Mofomamy sôkôla tiorka - Recipes Thermomix | ThermoRecipes
tsindrin-tsakafoOlona 12315 kaloria
Raha tia sôkôla ianao dia ity no iray amin'ireo mofomamy matsiro indrindra azonao andramana. Ho tianao ny sosona telo: ny iray misy sôkôla, ny iray misy crème ary ny sôkôla misy azy.
Miaraka amin'ny Thermomix izahay dia hanao mofomamy sôkôla mora izay hataonay be ranony miaraka amin'ny fifangaroana ronono sy kakao. Avy eo dia hokapohintsika ny crème mba hamoronana ny iray amin'ireo sosona amin'ity mofomamy ity.
Farany dia hosaronantsika amin'ny sosona sôkôla mora sy tsotra izy io, mba hamaranana ny fanaovana an'io fomba fanao mahafinaritra io. Azonao atao ny manamboatra ity recipe ity amin'ny alàlan'ny fanarahana ny vidéo izay azonao arahina eto ambany.
1 Mofomamy sôkôla tiorka
Ity mofomamy ity dia tena sakafo. Izy io dia vita amin'ny mofomamy misy sôkôla sôkôla misy ranom-boankazo sy sosona matsiro misy crème karavasy ary misy sôkôla malefaka.
185 g ny lafarinina
Ronono manontolo 200 ml
80 ml menaka tanamasoandro na dibera nitsonika
Vovo-mofo 15 g
30 g vovoka kakaô tsy mamy
Mandehana ny mofomamy sponjy
Kakaô 15 g
Layer ny crème
450 g ny karavasy mangatsiaka
Sokola 200 g
Krim-kapoka 250 ml
Manomboka amin'ny fanaovana ny mofomamy isika. Manafana ny lafaoro izahay amin'ny 180 °. Ao amin'ny vera Thermomix dia ampiana atody 3, ny ronono manontolo 200 ml, ny siramamy 145 g, ny 80 ary ny programa mandritra ny fotoana fohy. 30 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 3,5.
Ampio ny kakao 30 g, ny sotro lavanila, ny vovo-dronono 15 g ary ny lafarinina varimbazaha 185 g. 30 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 3,5.
Manomana lovia mahitsizoro efa misy menaka na taratasy fanaova fanaova ao ambany izahay mba ho mora esorina amin'ny lasitra. Mandatsaka ny fangaro eo an-tampony izahay, mametaka ny tavany ary mametraka azy ao anaty lafaoro mandritra ny 20 minitra miaraka amin'ny hafanana miakatra sy midina.
Manadio ny vera isika ary manampy ny 200 ml ny ronono manontolo sy ny 15 g ny kakaô. Programa izahay 30 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 3.
Esory avy ao anaty lafaoro ny mofomamy, avelao ho mafana ary atsipazo amin'ny sotro. Ampidirinay ny fandevenana vita amin’ny ronono miaraka amin’ny kakaô, ary atokanay.
Manadio ny vera izahay ary manampy ny crème 450 g mba hikapoka mangatsiaka be, ny siramamy 100 g ary ny eran'ny sotro lavanila. Manodidina azy io izahay 50 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 3,5. Ny fotoana dia manondro satria ny crème dia mety mila fotoana bebe kokoa na latsaka. Mety haharitra segondra na latsaka izany, arakaraka ny hatsiaka.
Zava-dehibe ny mangatsiaka ny mofomamy alohan'ny hampidirana ny crème. Hosaronantsika ny mofomamy ary hanalefaka ny ety. Atao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 20 minitra ilay izy mba hikolokolo haingana kokoa.
Ao amin'ny vera Thermomix dia ampiana ny sôkôla mainty 200 g mba hiempo miaraka amin'ny crème 250 ml. Mandamina izany mandritra ny fotoana 3 minitra amin'ny 90 ° amin'ny hafainganana 1,5. Ny sôkôla dia tsy maintsy avela hampangatsiaka alohan'ny handrakofana ny mofomamy.
Manarona ny mofomamy miaraka amin'ny fonon'ny sôkôla izay nomaninay. Averinay ao anaty vata fampangatsiahana izany mba hipetrahan'ny sôkôla. Arosoy mangatsiaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Postres » Mofomamy sôkôla tiorka
Cream tsaramaso maitso malefaka